GA GF uthotho kwishelufa ipleyiti yesikhenkcezisi, China GA GF uthotho kwishelufa ipleyiti yesikhenkcisi Abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Square Technology Group Co., Ltd.
Iqhiza lokujikeleza elizimeleyo
Isikhenkcezisi esiQinisekileyo seBelt
WA WF series tyaba ipleyiti efrijini
I-WF (J) Series Plate Freezer enefriji yefriji
GA GF series kwithala ipleyiti freezer
GF (J) uthotho semi-contact ipleyiti efrijini kunye neyunithi ifriji
Uluhlu lwe-HPF yolwandle olusisikhenkcezisi seplate
VPF series nkqo ipleyiti efrijini
IAluminiyam-ingxubevange yetreyi ebandayo
Isilingi ukufakwa komoya opholileyo
I-coil yomoya opholileyo
Icompact yomoya opholileyo
Isikhenkcezisi setafile efrijiweyo eveliswe yiTekhnoloji yeTeknoloji inokukhawulezisa ngokukhawuleza iintlobo ezininzi zeemveliso, ezinje ngeentlanzi kunye ne-shrimp, i-shellfish, imifuno, inyama eyahluliweyo, ukwahlula iinkukhu, kunye nokutya okuninzi okuneqhwa. Amacwecwe abekwe ngokuthe tye njengezishelufu ngelixa indawo yolungelelwaniso ilungisiwe. Iimveliso ziya kubekwa kwishelufa yesipleyiti yokugodola. Yahlukile kwimigangatho eqingqiweyo yetafile eqingqiweyo, ubungakanani bayo obukhulu bunokuyilwa ukuze kubenomkhenkce ophezulu.
● Yindibaniselwano yefriji yokuqhushumba kunye nefriji yokunxibelelana. Imveliso inxibelelana ne- ipleyiti yealuminiyam efrijiweyo kwicala layo elisezantsi, ngelixa abalandeli bevuthela ukubanda komoya opholileyo ngaphezulu nangamacala emveliso.
●Isitya senziwe nge-aluminium yodidi lwaselwandle. Ifriji ihamba nge imibhobho emininzi ngaphakathi kwipleyiti yealuminium. Ipleyiti ilula, yomelele, inqabile umhlwa kwaye ilungile kwi-conductivity eshushu.
●Isakhelo sisinyithi esishushu sentsimbi eshushu, esinganyangekiyo.
●Indawo ebiyelweyo igqunyiwe ngesiqwenga sePolyurethane esenza amagwebu ukuqinisekisa isakhiwo esomeleleyo kunye nokunciphisa ilahleko ebandayo ngokususa amalungu.
◆ Umkhenkce umthamo:>3000kg / ibhetshi (Ngokusekwe kwi: 15Kg / ibhloko, ubungakanani bebhloko: 600mm × 400mm × 80mm)
◆Inombolo yePlate: 10 Umaleko wokuqandisa: 10
◆Plate Indawo ebandayo: 5500mm × 1200mm
◆Ukucoca ipleyiti: 144mm; Ukucoca iNet: 110mm
◆Unikezelo lolwelo: Impompo
◆Umthwalo wefriji: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Ngomoya opholileyo)
◆Isantya somoya phakathi kwamacwecwe: 2m / s
◆Lobukhulu seyiyonke: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)
● Kukulungele ukubanda kweentlanzi, ii-shrimp, ukutya okulungiselelwe, iinkukhu kunye nokunye encinci epakishwe .
Iimveliso ezifanelekileyo / eziLondoloziweyo